Wariyeyaal lagu xiray Somaliland | KEYDMEDIA ONLINE
Wariyeyaal lagu xiray Somaliland
Afar wariye oo kamida kuwa ka howl gala magaalada Boorama ee maamulka Somaliland ayaa la xiray, kaddib markii ay baahiyeen war been abuur ahaa oo lagu waxyeeleenayo sharafta guddoomiyaha Boorame, sida lagu soo eedeeyay
BOORAMA, Soomaaliya - Maamulka Somaliland ayaa maanta xiray Wariyeyaal dhowr ah, kuwaasoo ka howlgala warbaahinta gaarka loo leeyahay ee magaalada Booroma.
Magacyada wariyeyaasha la xirxiray ayaa waxa ay kala yihiin:
Axmed Diiriye Ciiltire
Shucayb Maxamed Kaahin iyo
Cabdillaahi Daahir Wacays.
Xarigga wariyeyaasha ayaa la sheegay in uu amrkeeda bixiyay Guddoomiyaha Magaalada Boorama Saleemaan Xasan Xaadi. Sababta ayaa lagu sheegay in ay tahay kaddib markii ay baahiyeen in Guddoomiyaha Magaalada Boorama uu u baxsaday dalka Jabuuti markii lagu helay musuq maasuq la xiriira xafiiskiisa shaqada iyo ku takrifal awoodeed.
Maamulka Somaliland waxaa lagu eedeeyaa inay caburiyaan Wariyeyaasha ka howl gala deegaanda ay gacanta ku hayaan, ururrada warbaahinta ee ka dhisay deegaanada Somaliland ayaa dhowr mar qeylo-dhaan ka sameeyay xad gudubyada lagu hayo saxaafadda madaxa bannaan ee ka jirta halkaasi.
Xarigga saxafiiyiintan afarta ah ayaa noqonaya gabood falkii ugu horreeyay sanadkan cusub ee lagula kaco warbaahinta ka howl gasha Somaliland oo ku faanta hirgalinta nidaamka Dimuqraadiga ah iyo doorasho qof iyo cod ah oo ay ka qabteen deegaanadooda sanadihii u dambeeyay.